मृ’त्युद’ण्डबाट बाँ’चेर फर्केका उमेश भन्छन्, ‘करेन्ट लगाएर, औषधि खुवाएर मलाई बोल्न लगाउँथे’ – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/मृ’त्युद’ण्डबाट बाँ’चेर फर्केका उमेश भन्छन्, ‘करेन्ट लगाएर, औषधि खुवाएर मलाई बोल्न लगाउँथे’
मृ’त्युद’ण्डबाट बाँ’चेर फर्केका उमेश भन्छन्, ‘करेन्ट लगाएर, औषधि खुवाएर मलाई बोल्न लगाउँथे’
1,0126minutes read
फाँ’सीको मिति तय भइसकेर मृ’त्यु सुनिश्चित भइसकेको हुन्छ तर त्योभन्दा अघि चमत्कार हुन्छ । उनी मृ’त्युको मुखबाट जोगिन्छन् । वास्तवमै यो क्षण उनको पुनर्जन्म नै हो । त्यस्तै भएको छ उमेश यादवको जीवनमा । सन् २००६ मा रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका उमेश यादव एक पाकिस्तानी नागरिकको ह’त्याको आ’रोपमा जेल परेका थिए ।
त्यहाँको अदालतले उनलाई मृ’त्युद’ण्डको स’जाय घोषणा गरिसकेको थियो । उनको मृ’त्यु निश्चित भइसके पनि पाकिस्तानी पीडित परिवारले माफीनामा दिएमा उमेश यादव छुट्न सक्छन् भन्ने झिनो आशाको त्या’न्द्रो पनि देखिएको थियो । तर त्यसका लागि पहल गरिदिने कोही भएन । त्यति नै बेला सामाजिक अभियन्ता सरोज रायको कानमा यो खबर पुग्यो र उमेशलाई बचाउनुपर्छ भनी अभियानमा लागे ।
अन्ततः डेढ वर्षको प्रयासपछि उमेशलाई मृ’त्युको मुखबाट जोगाएर नेपाल फर्काए । आज उमेश यादव आफ्ना घरमा आमा, श्रीमती, छोराहरुसँग रमाइरहेका छन् । आशा मा’रिसकेका आमाबुबा तथा श्रीमती, छोराहरु पनि उमेशले पाएको नयाँ जीवनले प्रफुल्लित छन् । उमेशको घरमा मात्र होइन, त्यो गाउँमै खुसियाली छाएको छ । हाल उनी जनकपुरमा समान्य उपचार गराइरहेका छन् ।
प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा आधारित रहेर उमेश यादवसँग गरेको कुराकानीः
मृ’त्युको मुखबाट जोगिएर घर फर्कनुभएको छ, कस्तो लागिरहेको छ ?
–नयाँ जन्म पाएको महसुस भइरहेको छ । बाँ’च्छु, फेरि आमाबुबा, श्रीमती, छोराछोरीसँग भेट हुन्छ, समाजसँग भेट हुन्छ भन्ने आशा मा’रिसकेको थिएँ तर मृ’त्युको मुखबाट बाँ’चेर आएँ । मैले अर्को जन्म पाएको छु । समाजलाई नयाँ रूपमा पाएको छु । घरपरिवार आमाबुबा, श्रीमती, छोराहरुलाई पनि नयाँ रूपमा पाएको छु । मेरो जीवनका लागि यो चमत्कार नै हो ।
–भन्छन् मान्छेको जीवनमा दुःख पर्दा राम्रो कर्म गरिएको छ भने बचाउन कुनै न कुनै रूपमा भगवान नै आउँछन् । सायद मैले त्यस्तै राम्रो कर्म गरेको थिएँ होला, सरोज भाइ भगवानका रूपमा आउनुभयो । उहाँले मेरा लागि पहल नगरेको भए बाँ’च्ने थिइनँ । यसका लागि पाकिस्तानी परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले मलाई माफ गर्नुभयो । एउटा घ’टनाले त्यो परिवारको सदस्यको मृ’त्यु भयो, तैपनि त्यो परिवारले मलाई माफ गर्‍यो । त्यसैले त्यो परिवारलाई जति नै धन्यवाद दिए पनि कम हुन्छ ।
एक दिन जेलबाट यथार्थ कुरा के हो, त्यसको भिडियो बनाएर बाहिर पठाएको थिएँ । त्यो भिडियो हेरेर नै यो कुराहरु चर्चामा आएको थियो । सञ्चार माध्यममा आउन थाल्यो । पछि सरोज रायले यो कुरा थाहा पाएपछि मसँग सम्पर्क गर्नुभयो । उहाँसँग कुरा हुँदा पनि म यहाँबाट बाँ’चेर जान्छु जस्तो लागेको थिएन । नेपालका दाजुभाइ, आमाबुबा, श्रीमती र छोराहरुलाई भेट्छु भन्ने आशा मा’रिसकेको थिएँ ।
तपाईंका हातबाट एउटा पाकिस्तानीको मृ’त्यु कसरी भयो ?
–सन् २००६ मा म वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी गएको थिएँ । पाकिस्तानी साथी र म एउटै कम्पनीमा काम गरिरहेका थियौँ । एक दिन अचानक उहाँसँग मेरो झ’गडा भयो र अन्जानवश त्यस्तो घ’टना भयो । रि’सैरिसमा त्यस्तो घ’टना भयो । अस्पतालमा उहाँको उपचार चलिरहेको थियो । १७ दिनपछि उहाँको मृ’त्यु भएको थियो । उहाँको मृ’त्यु भएपछि मलाई कम्पनीमा खबर आयो । प्रहरीले समातेर मलाई जेलमा हालिदियो । म माथि ह’त्याको आ’रोपमा मु’द्दा चलाइयो ।
साँच्चै तपाईंले उहाँको ह’त्या नै गर्नुभएको हो ?
–यसलाई ह’त्या नभनौँ । कु’टपि’ट भएको थियो । सुरुमा उहाँले मलाई पि’ट्नुभयो । त्यही कु’टपि’टको क्रममा त्यस्तो घट’ना हुन गएको हो ।
काम गर्ने ठाउँमा पानीको ठूलो पाइप थियो । त्यसमा मिटर लागेको थियो । भर्‍’याङ लगाएर उहाँ माथि चढ्नुभयो । अचानक उहाँ तल खस्नुभयो । खसेपछि उहाँलाई म माथि नै रि’स उठ्यो कि क्या हो । उहाँले अचा’नक मलाई कु’टपि’ट गर्न थाल्नुभयो । म अकमक्कमा परेँ । उहाँले कु’टेपछि मलाई पनि रि’स उठ्यो ।
तपाईंमाथि कु’टपि’टका साथै रकम लु’टपा’टको पनि आ’रोप थियो नि ?
–त्यस्तो आ’रोप जबर्जस्ती लगाइएको हो । मैले नियोजित रुपमा कु’टपि’ट गरेको पनि होइन र रकम लु’टे पनि होइन । जबर्जस्ती स्वीकार गर्न लगाइएको थियो । त्यसका लागि निकै यातना दिए तर म होसमा हुँदासम्म त्यो कुरा स्वीकार गरिनँ । तर अदालतका रिपोर्टमा त्यस्ता कुरा उल्लेख गरेको मैले पाएँ । अरूको देशमा त्यहाँका शासन प्रशासनले केके गरे, ती कुरा मलाई थाहा थिएन । अब त म’र्छु नै भन्ने निश्चित भएपछि त्यस्ता आ’रोप ख’ण्डनको कुनै अर्थ रहँदैन भन्ने लाग्न थाल्यो ।
एक दिन जेलबाट यथार्थ कुरा के हो, त्यसको भिडियो बनाएर बाहिर पठाएको थिएँ । त्यो भिडियो हेरेर नै यो कुराहरु चर्चामा आएको थियो । सञ्चार माध्यममा आउन थाल्यो । पछि सरोज रायले यो कुरा थाहा पाएपछि मसँग सम्पर्क गर्नुभयो । उहाँसँग कुरा हुँदा पनि म यहाँबाट बाँ’चेर जान्छु जस्तो लागेको थिएन । नेपालका दाजुभाइ, आमाबुबा, श्रीमती र छोराहरुलाई भेट्छु भन्ने आशा मारिसकेको थिएँ ।
–नेपालको प्रहरी जस्तो छैन । यहाँको प्रहरीले त कमसे कम कुरा सुन्छन्, बुझ्छन् तर त्यहाँको प्रहरीले कुनै कुरा सुन्न नै मान्दैनन् । त्यसमा पनि म बाहिरको मान्छे थिएँ । त्यहाँ गएको एक महिना मात्र भएको थियो । धेरै कुरा थाहा पनि थिएन । प्रहरीलाई जेजे मन लाग्यो त्यो गर्‍यो । कुराहरु नबुझ्दा प्रहरीले जे–जे भन्थ्यो, त्यही कुरामा हो–हो भन्थेँ ।
त्यसले गर्दा झन् अदालतले मलाई उल्टो उल्टो कुरा सुनाउँथ्यो । पछि मैले त्यहाँको नेपाली राजदूतावास मार्फत असली कुरा थाहा पाएँ । अनि मात्र अलिकति सचेत हुन थालेको थिएँ । सुरुमा सात वर्षको सजाय भन्यो, त्यसपछि १० वर्षको सजा’य भनियो, त्यसपछि ११ वर्षको स’जाय दियो ।
तैपनि मैले कुनै कुरा स्वीकार गरेको थिइनँ । जब’र्जस्ती मलाई कु’टपि’ट गरी जथाभावी हस्ताक्षर गराउँथ्यो । सुरुमै दुईवटै परिवारलाई मिलाएर मा’फीनामाको प्रक्रिया सुरु गरेको भए छुट्थेँ तर कसैले त्यसका लागि तयारी गरेको थिएनँ । त्यसले गर्दा १३ वर्षसम्म लाग्यो ।
तीन वर्षसम्म म पूरै बेहोस् नै थिएँ । प्रहरी आएर कु’टपि’ट गथ्र्यो । कहिले के, कहिले के सोधिरहन्थ्यो । दिनदिनै क’रेन्ट लगाउँथ्यो । जब’र्जस्ती बोल्न लगाउन विभिन्न औषधि खुवाउँथ्यो । औषधि खाएपछि के बोल्थेँ, केही थाहा हुँदैनथ्यो । यति या’तना पाएँ कि तीन वर्षसम्म होस नै आएन ।
या’तना कतिको पाउनु भयो त्यहाँ ?
–तीन वर्षसम्म म पूरै बेहोस् नै थिएँ । प्रहरी आएर कु’टपि’ट गथ्र्यो । कहिले के, कहिले के सोधिरहन्थ्यो । दिनदिनै करे’न्ट लगाउँथ्यो । जब’र्जस्ती बोल्न लगाउन विभिन्न औषधि खुवाउँथ्यो । औषधि खाएपछि के बोल्थेँ, केही थाहा हुँदैनथ्यो । यति या’तना पाएँ कि तीन वर्षसम्म होस नै आएन ।
खाना त्यस्तै दिन्थ्यो, खान मन लाग्दैनथ्यो । एक त त्यहाँको खानामा रुचि लागेको थिएन । चारजनालाई एउटा बेड दिएको थियो । त्यसमा आलोपालो सुत्नुपथ्र्यो । पछि नेपालका नेताहरुसँग पनि सम्पर्क गर्न थालेको थिएँ । रामचन्द्र झादखि उपेन्द्र यादवसम्मका नेताहरुसँग फोनमा कुरा गरी बचाउनका लागि आग्रह गरेको थिएँ ।
उहाँहरुले पनि प्रयास गर्दैछु भनी आश्वासन दिनुभएको थियो । उहाँहरुले के के प्रयास गर्नुभयो, त्यो मलाई थाहा भएन । तर मैले के थाहा पाए भने साउदी नै गएर कसैले प्रयास गरेका भए म पाँच सात वर्षमै छुट्थेँ तर कसैले पहल गरेको थिएन ।
–मसँग मोबाइल थिएन तर त्यही देशका कैदीहरुले कहाँ कहाँबाट लु’काई छि’पाई राखेका हुन्थे । उनीहरुलाई भेट्न आउने आफन्तले लुकाएर ल्याएर दिन्थेँ । उनीहरु त्यहाँका प्रहरी प्रशासनसँग पनि भित्रैभित्रै मिलेको हुन्थे । अनि म ती कैदीहरुसँग मागेर घरपरिवार, आफन्तसँग कहिलेकाहीँ कुरा गर्थें । त्यहाँका कैदीहरुको काम गरिदिन्थेँ ।
कहिले लुगा धोइदिन्थेँ भने कहिले तेल मालिस गरिदिन्थेँ । कहिले के काम त कहिले के काम गरिदिन्थेँ । अनि उनीहरु खुसी भएर कहिले रिचार्ज कार्ड त कहिले मोबाइल दिएर सहयोग गर्थे । भित्र कैदीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध थियो । उनीहरुले पनि सहयोग गर्थे ।
मृ’त्युको मुखबाट बाँ’चेर घरफर्किनुभयो अब के गर्ने इच्छा छ ?
–एकजना नेपाली विवेक दाहाल १४ वर्षदेखि जेलमा छन् । उहाँका लागि कुनै पहल भइरहेको छैन । मैले त्यही कुराको जानकारी गराउन मन्त्रीज्यूलाई भेट्न गएको थिएँ । मैले सरोज भाइजीलाई साउदी पठाउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको थिएँ । सरोज भाइजी जानुभयो भने अवश्य विवेक दाहाल छुटेर आउनसक्छन्, त्यो कुरा मैले मन्त्रीलाई भनेको थिएँ ।
अनि मन्त्रीज्यूले ‘हुन्छ, सरोजजी गएर कसैको ज्यान बँच्छ भने जानुपर्छ । म त्यसका लागि केके गर्नुपर्छ सबै गर्छु’ भन्नुभयो । अनि मैले म १४ वर्ष बिताएर साउदीबाट आएको छु । मसँग अब केही छैन । दुईवटा छोरा छन् । आमाबुबा हुनुहुन्छ मलाई सरकारले केही व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको थिएँ अनि मन्त्रीजीले सरकारबाट केही न केही सहयोग गराउँछु भनी आश्वासन दिनुभएको छ ।
–हालसम्म नेपाल सरकारबाट मैले कुनै सहयोग पाएको छैन । सरोज भाइजीले मेरा लागि गरेको प्रयासमा केही कागजात बनाउनमा सहयोग गरेको होला, त्यति नै हो । यदि नेपाल सरकारले सुरुदेखि पहल गरेको भए मैले यत्रो दुःख पाउने थिइनँ । मसँगै रहेका एकजना नेपालीलाई ३० लाख रुपियाँ दिएर नेपाल सरकारले लगेको थियो तर मेरा लागि कुनै पहल गरेको थिएन ।
मेरो लागि पनि पहल गरेको भए, पाकिस्तानी परिवारसँग कुरा गरेको भए सायद म पनि त्यतिबेलै छुट्थेँ तर मेरा लागि सरकारले केही गरेन । मधेसी र पहाडीमा त्यहाँ पनि विभेद गरेको देखियो । के म नेपाली होइन ? उसलाई ३० लाख रुपियाँ दिएर सरकारले रिहा गराएको थियो तर मेरा लागि समाजले चन्दा उठाएर पीडित परिवारलाई ब्लडमनी दियो अनि रिहा भएँ । मेरा लागि सरकारले केही गरेन ।
–एक लाख ६५ हजार रूपैयाँ ऋण लिएर मेनपावरलाई बुझाएर म साउदी गएको थिएँ । त्यसमध्ये अलिकता खेत बेचेर ७० हजार जति ऋण तिरेको थिएँ अरू सबै बाँकी नै थियो । अहिले पाँच लाखभन्दा बढी ऋण भइसकेको छ । घडेरीबाहेक अब जमिन पनि छैन ।
एउटा घर मात्र छ । चार कठ्ठा जमिन बेचेर अलिअलि तिरेको थिएँ । अब जमिन पनि छैन । ऋण तिर्ने सामथ्र्य पनि छैन । एउटा दुःख झेलेर गाउँ त आएँ अब अर्को चि’न्ता सुरु भयो कि साहुको ऋण कसरी तिर्ने ! त्यसैले म सरकारसँग के आग्रह गर्छु भने केही सहयोग गरोस् । मेरी श्रीमती एउटा कारखानामा काम गर्छिन्, त्यसबाट केही गुजारा चल्छ । छोराहरुलाई पढ्नका लागि सरोज भाइजीले केही व्यवस्था मिलाउनु भएको छ ।
शशाङ्क कोइराला भन्छन् : “दुई तीन दिनमा डिस्चार्ज हुन्छु”